MacBook ahịa toro 94% na nkeji iri na ise nke afọ a | Esi m mac
MacBook ahịa toro 94% na nkeji iri na ise nke afọ a
Ke akpa nkeji iri na ise nke afọ a Apple rere fọrọ nke nta 6 nde MacBooks. Ọnụ ọgụgụ ahụ bụ atụmatụ, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ anaghị enyekarị ọtụtụ ozi gbasara ahịa ya, ọ bụ ezie na ha bụ ọnụ ọgụgụ iji gosi.
O doro anya na oge ọhụrụ nke Macs Apple sịlịkọn Ọ bụ ihe ịga nke ọma maka ụlọ ọrụ ahụ. Betgba nzọ dị egwu site n'aka Apple, na oge zuru oke zuru ụwa ọnụ, mana enweghị mgbagha nke ziri ezi. Ma ugbua, iMac izizi pụtakwara na ihe nhazi M1. Ezigbo oge maka Apple, obi abụọ adịghị ya.
Apple ereela atụmatụ 5,7 nde nke MacBooks ke akpa nkeji iri na ise nke 2021, dabere na ọhụrụ bipụtara laptọọpụ ahịa atụmatụ taa site na Strategy Analytics.
Ọnụ ọgụgụ ahụ gụnyere ahịa nke ụdị MacBook Pro y MacBook Ikuku, ewepu Mac mini, Mac Pro, na iMac. Nke ahụ bụ, naanị laptọọpụ ụlọ ọrụ.
Apple bụ nke anọ kachasị ukwuu na laptọọpụ na-arụ n'ụwa niile, na-enyocha Dell, HP na Lenovo, na ụlọ ọrụ atọ ahụ na-ebugharị n'etiti laptọọpụ 10 na 16 nde n'oge mbụ nke 2021.
Laptọọpụ nde 5,7 nke Apple rere amụbaala pasent 94 ma e jiri ya tụnyere nde 2,9 ọ kwụrụ na nkeji afọ gara aga. Ihe a niile n'ihi nnukwu ike na-abịa site na-aga n'ihu na-achọ n'aka ndị ọrụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-amụ ihe site n'ụlọ n'ihi ọrịa ahụ na-efe efe, yana nnabata dị mma nke ndị ọrụ maka Macs ọhụrụ na nhazi. M1.
Onu ahia Apple na nkeji iri na ise bu 8.4 percent, ma e jiri ya tụnyere 7.8 percent n’afọ gara aga. Lenovo y HP ha na-anọgide na-abụ ndị isi ahịa, na-ere ọtụtụ laptọọpụ na-agba Windows n'akụkụ Chromebooks, yana uto siri ike na ngalaba agụmakwụkwọ, ọkachasị n'ihi ọnụahịa ha.
Ezigbo ahịa ekele M1
A na-atụ anya ịhapụ MacBook ọhụrụ n'oge na-adịghị anya.
Ọnụ ọgụgụ ahịa laptọọpụ mụbara pasent 81 kwa afọ n'etiti ndị na-ere ahịa niile. Apple Karịsịa, ọ nwere ike ịhụ nnukwu uto, n'ihi mbido November nke 1-inch MacBook Pro M13 na MacBook Air.
Apple nwere ike ịnọgide na-eto PC ahịa ya ka ọ na-akwadebe iwebata ụdị Apple Silicon dị ike karị, karịchaa n'afọ a. Asịrị na-egosi na enwere ụdị emelitere 16-anụ ọhịa MacBook Pro njikere ịmalite, na a iMac M1 buru ibu karịa anụ ọhịa ahụ ugbu a. A na-atụ anya Apple iwebata MacBook Air ọhụrụ na MacBook Pro ọhụrụ, mana ha nwere ike ọ gaghị erute ruo 24.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » MacBook ahịa toro 94% na nkeji iri na ise nke afọ a
Onye isi ala IBM kwuru na ụkọ mgbawa nwere ike ịnọ afọ abụọ ọzọ